Mmekọrịta Atụmatụ maka Singles & Nzute na Datebọchị Kwesịrị Ekwesị!
Ọtụtụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye na-enwe ihe isi ike izute onye ziri ezi. Ihe kpatara nke a bụ na n’ihi na ha na nwoke na nwanyị na-eme, ha na-ahụkarị ndị na-enweghị otu ihe ha bu n’obi. Dịka ọmụmaatụ, ka ị na-achọ onye gị na ya ga-ebi ndụ ogologo oge, ị ga-ahụ ọtụtụ ndị nọ na ọdọ mmiri na-achọ ịlụ ọgụ.
15 ATBATTA DOB'ST DO NA DonT: Atụmatụ maka ịme nke ọma #GIRLTALKNa
N'oge usoro mkpakọrịta nwoke na nwanyị, enwere oge nke nwere ike ibute nnukwu nrụgide. Nke a na - abụkarị mgbe ị na - abịaru nso mkpakọrịta nwoke na nwaanyị dị ka ọrụ ma ọ bụ ozi nke gunyere ịkwado onwe gị ka ndị ọzọ nabata gị. Naanị na-adị gị ma na-etinye aka na ihe omume ị na-atọ gị ụtọ mgbe ahụ ị ga-ezute ndị nwere ụdị obi na gburugburu ndị ahụ.